संसारका श्रमिक एक होऔं भन्ने पार्टीको सरकार छ, मजदुर सडकमा रुँदैछन्
बिहानको ५.३० बज्यो । सूर्योदय हुँदै छ । नीलो ट्रयाकसुट । रातो पालिवाला टोपी । गोल्डस्टार जुत्ता । हातमा पञ्जा र मुखमा सर्जिकल मास्क । पछाडि सानो ब्याग बोकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारको तीन नम्बर गेटबाट बाहिरिए । उनको साथमा सधैँ लावालस्कर हुन्थ्यो । तर, आज पुट्ट परेको भुँडी ढल्काउँदै पैदलै उनी भाटभटेनीतिर मोडिए ।
सादा पोशाकमा एक जना नेपाल प्रहरी र एक जना नेपाली सेनाबाहेक उनको साथमा अरु कोही छैनन् । ‘मर्निङ वाक्’ शैलीमा उनी लम्किरहेका छन् । बाटोमा खासै प्रतिक्रिया छैन । सडकमा भेटिएकाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चिनेनन् । सायद चिनेका भए बोल्थे पनि होलान् । नमस्कार त पक्कै गर्थे । जस्तो रिसाएको मानिस भेटिए पनि अभिभादनस्वरुप नमस्कार गर्ने हाम्रो संस्कार हो । लम्किरहेका पाइलाहरू रत्नपार्कमा पुगेर रोकिए । गैरीधारा, दरबारमार्ग हुँदै उनी त्यहाँ पुगेका थिए ।
रत्नपार्कको गेटमा पुग्नासाथ प्रधानमन्त्रीले पछाडि बोकेको ब्याग खोले । ब्यागबाट रारा चाउचाउको कार्टुन निकाले र त्यही कार्टुनमाथि उनी थचक्क बसे । झोलाबाट कालो, रातो ब्रस र पोलिस निकाले । दुई जोर पुराना जुत्ता पनि । त्यसमध्ये एकलाई उनी टल्काउन थाले । त्यत्तिकैमा कंलकीबाट आएको नीलो माइक्रोबस रोकियो । गाडीमा कोचाकोच हुँदा जुत्तामा भएको फोहोर हटाउन एक युवक उनको छेउमा आए ।
कालो ब्रसले प्रधानमन्त्रीले त्यो जुत्ता सफा गरिदिए । युवकले १० रुपैयाँ दिए र आफ्नो बाटो लागे । अलिक पर रोकिएका सादा पोशाकका दुई सुरक्षाकर्मीले बल्ल थाहा पाए– हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री जनताको जुत्ता सफा गर्न रत्नपार्कमा आएका रहेछन् ।
५० जनाजतिको जुत्ता पालिस गरेपछि हल्लाखल्ला भयो । एक जनाले प्रधानमन्त्रीलाई चिनेछन् र सेल्फी खिच्न खोजे । क्यामेरा देख्नासाथ पोज दिने प्रधानमन्त्रीको पुरानै बानी । मास्क यसो तल के झारेका थिए ‘प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री’ भन्दै हल्ला भयो । एकैछिनमा रत्नपार्क भरियो । 'वाह, प्रधानमन्त्री ! जनताको सेवा गर्न यो स्तरसम्म !’ सबैले जयजयकार गर्न थाले ।
उता, महाराजगञ्ज चोकबाट नयाँ बसपार्कसम्म मानिसको भिड छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एक टोलीले सडक सफा गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिरहेको छ । सडकको छेउमा अलकत्र पाकिरहेको छ । हातमा कराई लिएर देउवा उभिएका छन् । कराईमा अलकत्र लगेर उनले सडकमा खन्याए । यो टोलीले आज बालाजुसम्मको खाल्डाखुल्डी पुर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सडकमा काम गर्न आएकाहरू भोकाए कि भनी आरजु देउवाको टोली खाना पकाउन र खुवाउन व्यस्त छ । दिउँसोको खाना बनाउने पालो देउवाको रहेछ । उनले त्यसका लागि तयार रहेको संकेत गरे । खाना पोखिए पनि टिपेर खाऊँजस्तो सडक टल्किएको छ । नेपालभरका सडक यस्तै बनाउने र दिनरात यसै गरी काम गर्ने लक्ष्य लिइएका कारण बोल्ने फुर्सद पनि नभएको देउवाले बताए ।
ज्यादै फुर्तीका साथ एक जनाले कोटेश्वर चोकको पेटी खनिरहेका छन् । उनको वरपर दुई/चार जना छन् । र, उनीहरूले पनि होस्टेमा हैँसे गरिरहेका छन् । यो टोलीले गौशालासम्मका पेटीलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो टोली पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को रहेछ । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई बिर्सिएको भनी गर्ने आलोचनालाई कामबाट जवाफ दिने उनको योजना रहेछ ।
काठमाडौंका सडक अपाङ्गमैत्री भए भने देशभर यसको सन्देश जान्छ । र, जनताको साथमा प्रचण्ड रहेको पुष्टि हुन्छ । यस्तै, कुरा गर्दै उनी सडक खन्न व्यस्त छन् । आजदेखि नै उनले आलिशान बंगाला छाडेर सामान्य जीवन जिउने योजना पनि सुनाए । उनको यो कुरा भुइँमा झर्न नपाउँदै गडगडाहट ताली बज्यो ।
सिमरा एयरपोर्टमा मानिसको भिड छ । जयजयकार गर्दै मानिसहरू जम्मा भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले काठमाडौं त्यागेछन् । प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको गल्तीलाई स्वीकार गरी जनतासँग माफी माग्दै अब राजनीति होइन, समाज सेवा गर्ने प्रण गरेछन् । र, कोटेश्वरको घर नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी उनी सदाका लागि रौतहट लागेछन् । अब उनले रौतहटलगायत प्रदेश २ का नौ जिल्लामा शौचालय बनाउन मजदुरी गर्ने, बालविवाह र दाइजो प्रथाले गाँजेको समाजमा चेतना फैलाउने काम गर्ने योजना सुनाए ।
जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र हेरेर उमेर पहिचान गर्ने र दाइजो नलिने ग्यारेण्टी गरेपछि मात्र विवाह गर्ने कार्यका लागि प्रदेश २ का पण्डित र पुजारीको संगठन बनाउने योजना सुनाउँदा महिलाहरू सुँक्कसुँक्क गर्न थाले । उनीहरूका आँखा खुसीको आँसुले टलपल भए ।
आजसम्म छुचो, तिखो र असभ्य शब्दहरू बोलेर नाम र पदको बदनामी कमाएकोमा सार्वजनिक माफी माग्न सडकमा उभिएका छन् डा. बाबुराम भट्टराई । कुण्ठा, छुद्र र अस्थिरको पर्याय बन्नुपरेकोमा उनमा ठूलो हीनताबोध रहेछ । जसका कारण उनले सक्रिय राजनीति छोडेर बिहान कलेज पढाउने, दिनभर ठेलागाडामा मःम र पुस्तक सँगै बेच्ने पेसा सुरु गर्न थालेछन् । उनको यो अभियानमा साथ दिन हिसिला यमी पनि तयार छिन् । हिजो बाबुराममार्फत परिवारका सदस्यहरू सबैलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्न लगाएकोमा उनलाई पछुतो रहेछ । अब उनले यमरी र बाराको व्यापार गर्ने योजना सुनाइन् ।
हातमा सातुको पोको बोकेर तनहुँको घिरिङतिर डुलिरहेका छन् रामचन्द्र पौडेल । बिहान काममा जान हतार भएको घरमा गएर भैँसी दुहुने कार्यक्रम रहेछ उनको । एक दिनमा पाँचवटा भैँसी दुहुन सक्ने आँट उनमा छ ।
एक हुल मानिस रातोपिरो हुँदै अन्नपूर्ण बेसक्याम्प ३ मा पुगे । यो टोली थियो पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको । यो टोलीमा अधिकांश विदेशी नागरिक थिए । पूर्वपर्यटनमन्त्रीले नै बेस क्याम्प घुमाउन लगेकोमा उनीहरू मक्ख पर्दै फोटो खिचिरहेका थिए । योगेश पर्यटनमन्त्री थिए भनेर क्याम्पमा पुगेपछि मात्र भनिएको हो । एक हप्ताको पैदलयात्रापछि यो टोली त्यहाँ पुग्न सक्यो । यो टोलीलाई स्वागत गर्न पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल तयार भएर बसेका छन् । उनले भव्य स्वागत गरे–माला र खादा होइन, माउण्टेन म:म र टिमुरको अचारका साथ । त्यो पनि आफैँले बनाएर ।
निवर्तमान पर्यटनमन्त्री पथप्रदर्शक । वर्तमान पर्यटनमन्त्री माउण्टेन म:म बनाएर पर्यटकको स्वागतमा । विदेशीहरू खुसी भए । त्यही टोलीमा एक जना बीबीसीका पत्रकार रहेछन् संसारभर समाचार फैलियो । भिजिट नेपाल विश्वरभर पुग्यो । अखिलमा रिसाएका, एकले अर्कोलाई देख्दा कालो बिरालो आयोजस्तो गर्नेहरू मिल्दा संसार आफ्नै हुँदो रहेछ । दुवै जना गफमा मस्किए ।
आफ्नै छोराले अरु साथीसँग मिलेर लाजिम्पाटतिर होटलमा गरेको लगानी र त्यसको पारदर्शितामा उठेको सवाललाई जनतामाझ ल्याउन लाजिम्पाटतिर जाँदै छन् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' । यही बेला उनलाई फोन आयो । एक जनासँगको कुरा सकाउन नपाउँदै अर्को फोन आइरहेको छ । डोल्पा र हुम्लामा अत्यधिक ट्राफिक चापका कारण जनशक्तिको अभाव भएको भनी बारम्बार आएको फोनलाई रेस्पोन्स गर्नमा व्यस्त छन् उनी । महिला नेत्रीहरूलाई राति म्यासेज पठाउने मन्त्रीका बारेमा उनको फोनमा गुनासो आयो । त्यो सुन्नासाथ ती मन्त्रीलाई समाएर ल्याउन उनले प्रहरीलाई तत्कालै खटाए ।
शंखमुलको छेउमा पाँच जना भरखरका युवाहरू छन् । उनीहरू बागमतीको तिरमा बसेर माछा पोलेर खाइरहेका छन् । र, उनीहरूको सेवामा हाजिर छन् शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह । फोहोर र दुर्गन्धले ग्रसित बागमतीको माछा खानलायक भयो र यसको सन्देश दिइरहेका छन् मन्त्री स्वयम्‌ले । ठूलो भिडमा रिबन काटेर होइन, देशका मेरुदण्ड युवाहरूलाई बागमतीमा फिसिङ गर्न सम्भव छ भनेर । माछा मात्र मारेर नदीबाट ल्याउन उनी लागेका हैनन्– माछा पोल्ने, युवाहरूलाई पानीलगायत अरु खानेकुरा आफैँ दिने र सफा गर्नमा पनि मन्त्री शाह फुर्तीका साथ खटिएका छन् ।
गौशालाबाट कोटेश्वरको सातदोबाटो भनेर यात्रु बोलाएका पाका व्यक्तितिर सबैको आखाँ गयो । उनी थिए– यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ । चक्रपथ परिक्रमा गर्ने महानगर यातायातमा उनी भेटिए । यात्रुको रूपमा होइन, सहचालकको रूपमा । यात्रुहरू खचाखच भए । गाडीमा लेखिएअनुसार सिटमा बस्न थाले । महिलाको सिट, अपाङ्गको सिटमा अरु बसेनन् । बरु उभिए । यो संस्कार देखेर उनी अचम्मित भए । मनमनै गुनगुनाए,‘गाडीमा त यसरी नियम मान्दा रहेछन् जनताले ! किन हाम्रो प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले एक लिङ्गको मात्र पार्टी बनाउन खोज्नुभएको होला ?’ उहाँलाई नियम लाग्दो रहेनछ कि के हो ? यस्तै सोच्दै थिए, गाडीको चर्को हर्न बज्यो । उनी फेरि कराए ग्वार्को, सातदोवाटो, एकान्तकुना.... ।
सिरहामा नहर बनाउन व्यस्त छन् सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी । उनको टोलीले ५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । धमाधम काममा व्यस्त उनी गाउँमा पानी नझरेसम्म फोनमा कसैसँग नबोल्ने भएका छन् । पाँच दिनमा नहर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य यो टोलीले लिएको छ ।
सिनामंगलछेउमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा अनौपचारिक कक्षामा पढाइरहेको अवस्थामा भेटिए शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । विद्यालय गए पनि शिक्षामा कमजोर बालबालिकालाई विद्यालय नछोडून् भन्नका लागि व्यवस्था गरिएको अनौपचारिक कक्षामा हरेक दिन बिहान १ घण्टा पढाउने उनको योजना रहेछ । साथै, कुनै पनि बालबालिका विद्यालय जान पाएन भने तुरुन्त व्यवस्था गर्न उनले आफ्नो टिम खटाएका छन् । र, पढाएको अन्तिममा एक वाक्य बोल्ने उनको शैली नै बनेछ, ‘हामी कसैका पुजारी र अनावश्यक आलोचक होइनौँ ! हामी त एकअर्कोलाई सम्मान र आदर गर्ने संस्कारी हौँ, नपत्याए मलाई नै हेर्नुहोस ।’
शिक्षामन्त्रीको कक्षा सकिन नपाउँदै भूमि व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे त्यहाँ पुगिन् । एक परिवारमा दिनभर बिताउने उनको योजना रहेछ । उनीहरूका समस्या बुझ्न बिहानको खाना पकाउने, घर सफा गर्ने, दिनभरको खाजा, बेलुकाको खाना सँगै खाएर फर्कने कार्यक्रम तय भएको रहेछ । खोलाको तिरमा बस्दा जीवन तलमाथि पर्न सक्छ भनी सुकुम्बासीलाई सम्झाएर अन्यत्र सार्ने उनको लक्ष्य छ । त्यसैका लागि उनी हप्तामा एक दिन सुकुम्बासीकहाँ जाने र भलाकुसारी गर्ने योजना रहेछ । र, आज त्यही भयो ।
इन्द्रावतीको किनारमा चैते धान रोप्न व्यस्त टोलीको बीचमा सानो हल्का छाडेको कपाल, सडक्क परेको नीलो सारीमा भेटिइन् कृषिमन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल । चैते धान भए पनि असारे भाकामा रोपाहारहरूले धान रोपिरहेका छन् । कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विचौलिया व्यापारीलाई पोसेको कोठे आरोप जनताको अभिमतले काट्ने कुरामा उनी विश्वस्त थिइन् । कृषिमा लगानी गरी जमिन बाँझो नराख्ने वातावरण बनाउने उनको योजना रहेछ ।
वीर अस्पतालबाट ट्रमा सेन्टरतिर निस्कने गेटको मुखमा छन् स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी । अस्तालको कुनाकाप्चा र शौचालय साह्रै फोहोर । त्यही फोहोर सफा गर्न तल्लीन छन् उनी । अब हरेक दिन मर्निङ वाक् उनको एक अस्पतालको फोहोर उठाएर सुरु हुन्छ ।
चाँगुनाराण भक्तपुरमा रहेको इँटा उद्योगमा काम गरिरहेका छन् श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी । उनले जति इँटा बोक्छन्, त्यति संख्यामा बालबालिका इँटाभट्टाबाट मुक्त हुने योजना रहेछ । त्यहाँ दिनभर श्रम गरेर उनी सिधैँ वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जाने कार्यक्रम छ । नेपालमा वयष्कले ठूलो सानो नभनी काम गर्ने र त्यसको सम्मान हुने अवस्था सिर्जना भयो भने बालश्रम हट्ने मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा पनि कमी आउँछ ।
चौधरीको योजनाका लागि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट पनि तयार नै रहेछन् । उनी पनि हिमाल सिमेन्टमा मजदुरी गरेको अवस्थामा भेटिए । दिनरात नभनी काम गरेर हिमाल सिमेन्ट सञ्चालनमा ल्याउन उनको टोली मैदानमा खटिएको छ ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भृकुटी कागज, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विराटनगर जुटमिल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको टोली बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन मजदुरीमा व्यस्त छ ।
लगनखेल चोकमा फोहोर टिपिरहेको अवस्थामा भेटिए वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आले । जथाभावी फोहोर फालेका कारण वातावरणको विनाश भयो । अर्कोतिर वन फडानी तीव्र भएका कारण बाढीपहिरोको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ । कतै एक रुख काटियो भने वनमन्त्रीको मुटुमा चसक्क हुँदो रहेछ । घरीघरी रुँदा पनि रहेछन् उनी ।
कुण्ठा, छुद्र र अस्थिरको पर्याय बन्नुपरेकोमा डा. बाबुराम भट्टराईमा ठूलो हीनताबोध रहेछ । जसका कारण उनले सक्रिय राजनीति छोडेर बिहान कलेज पढाउने, दिनभर ठेलागाडामा मःम र पुस्तक सँगै बेच्ने पेसा सुरु गर्न थालेछन् ।
रोल्पाको लिवाङबाट धवाङ जान पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । यो कामका लागि तँछाडमछाड छ । सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलोलाई सबैले माया गर्ने भएकाले मजदुरी गर्नेहरूको पनि भिड छ । नेत्रविक्रम चन्द, वर्ममान पुन, जयपुरी घर्ती, गोकुल घर्तीहरू एकआपसमा मिलेर काम गरिरहेको बेला खानेपानीमन्त्री मणि थापा टुप्लुक्क आइपुगे । उनको हातमा थियो माटोको घैँटो र त्यसभरि चिसो पानी । उनले सबैलाई चिसो पानी खुवाए । र, लिफ्टिङमार्फत एकसाथ लिवाङ र धवाङमा माडीखोलाको पानी ल्याउने योजना सुनाए । यो आयोजना सम्पन्न नहुने बेलासम्म मजदुरी गर्न आएको मात्र के भनेका थिए, वर्षमान पुनले मणि थापालाई अँगालोमा कसिहाले ।
१ सय रुपैयाँमा मास्टर डिग्री हासिल गर्न पाइने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा कक्षा लिइरहेका छन् परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले । उनले भने, ‘कूटनीति भनेको देशको हितमा हुनुपर्दछ । देशको हितलाई ध्यानमा राखेर कूटनीतिक पहल गर्न नसकेका कारण आज कोरोनाको यो लहर नेपालमा आएको छ र यसको जिम्मेवार म हुँ ।’
विद्यार्थीले प्रश्न गरे, 'कसरी ?'
उनले भने, ‘भारतसँग नडराएको भए यस्तो हुने थिएन । भारतबाट तेस्रो मुलुक जान प्रतिबन्ध लागे पनि भारतीय नागरिकलाई हाम्रो देशबाट अन्यत्र जान खुल्ला छाड्यौँ, त्यसैका कारण आज यो अवस्था आयो, म नेपाली जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु ।’
हरेक शनिबार खाद्यान्न पोको पार्नमा व्यस्त हुन्छन् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । दुई छाक खान नपाउनेका सहारा हुन् उनी । पहिलो वर्ष यसरी खाद्यान्न बाँड्ने र अर्को वर्ष उनीहरूले रोजगारी पाएपछि उनीहरूकै हातबाट लड्डु खाने योजना रहेछ उनको । आजको उनको गन्तव्य चितवनको चेपाङ बस्ती रहेछ । त्यहाँ दिनभर मजदुरी गर्ने पनि उनको योजना छ । भैँसेपाटीको घर छोराछोरीलाई होइन, तिनै चेपाङका नाममा पास गर्ने योजना पनि उनले सुनाए ।
मदननगर बल्खुमा ईश्वर पोखरेलको साथमा केही मानिसहरू जम्मा भएका छन् । पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि उनीहरूले काम गरिरहेका छन् । गएको हप्ता बसेको एमाले पार्टीको बैठकले एक निर्णय गरेको छ । पार्टीभित्र महिलाहरू असुरक्षित भए । पार्टीमा आकर्षित भएका महिलाहरूलाई पार्टीकै नेताहरूले यौन आसय राखेर त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्न थाले भन्ने गुनासो आयो । त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी ईश्वर पोखरेललाई दिइएको छ । र, उनले नियम बनाएका छन्, राति ९ बजेपछि फोन र म्यासेज गर्न पाइने छैन । कसैलाई बाबा, सानु, मायालु भनेर म्यासेज लेख्न पनि बन्देज छ । यस्तो म्यासेज लेखेको पाइए ठूलो सजाय हुने उनले सुनाए । यस्तो कुरा सुन्नासाथ सबैले ताली बजाए ।
अनामनगरबाट सडक सफा गर्दै आएका मुकुन्द न्यौपाने न्यूप्लाजा कट्नासाथ टक्क रोकिए । माथि हेर्दा टोपी खस्लाजस्तो जिफन्टको महलतिर हेर्दै भने, ‘हिजो सडकमा भौँतारिएको केटो आज देशको बागडोर सम्हाल्ने गरी हातमा लिएको छ, भवन पनि ठूलो छ तर मजदुर जस्ताको तस्तै ।’ सायद उनको यो संकेत विष्णु रिमालतिर पो हो कि !
बालुवाटार चोकको तीनतले भवनमा बेलुनहरू बाँधेर झलमल बनाइएको छ । त्यो भवनका तीनै तला झलनाथ खनालले भाडामा लिएका रहेछन् । एक तलामा कफी सप, दोस्रोमा कक्षा र तेस्रोमा पुस्तकालय । र ‘हामी भाइभाइ’ नामक यो कफीशालाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेछ ।
प्रधानमन्त्री आइपुगे । झलनाथले स्वागत गरे । सक्रिय राजनीति छाडेर दिनभर कफीशालामा कफी खुवाउने, मार्क्सवादी दर्शन माथिल्लो तल्लामा सिकाउने र आवश्यक पुस्तकहरू पुस्तकालयबाट फर्काउने गरी लैजान सकिने गरी दुई भाइले साझेदारीमा यो कफीशाला खोलेका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनेहरू धेरै बेर कुर्नुपर्दा हुने पीडालाई यही कफीशालामा दर्शन पढाएर झलनाथले समय मिलाउने व्यवस्था गरिएको रहेछ । प्रधानमन्त्री पनि सक्रिय राजनीति छाडेपछि यही कफीशालामा आएर दिन बिताउने कुरा सुनाइयो ।
जुन टीभी खोले पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरूको दिनचर्याका बारेमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ । सबैले नेताहरूको गुनगान मात्र गाएका छन् । यी सबै कार्यक्रमको चाँजोपाँजो मिलाएका रहेछन् सूर्य थापाले । फेसबुक, ट्वीटरतिर पनि उनको व्यवस्थापन र चुस्तताको चर्चा छ । काम गर्ने मान्छेलाई गाली त आउँछ नै । उनलाई पनि गाली आएकै छन् । तर, ती गालीलाई प्रेरणाको स्रोतको रूपमा लिएको थापाको जवाफ छ । यस्तो देखेपछि सबैले उनलाई प्रशंसा गरिरहेका छन् । लाग्छ, शालीनताको पर्याय सूर्य थापा हुन् ।
बारम्बार मोबाइलको घण्टी बजिरहेको छ । काट्छु, फेरि बज्छ । यसो हेरेको त मर्निङ वाक् जान ढिला भएछ । छिमेकी दाइको फोन रहेछ । हतारहतार ट्रयाकसुट लगाएर निस्किएँ । ढिलो हुनाको कारण दाइलाई सविस्तार बताएँ ।
मेरो कुरा सुनेपछि दाइको जवाफ आयो, ‘भाइ, तिम्रो सपना साकार हुन सक्छ, सम्भव छ ।’
'कसरी ?,' मैले सोधेँ ।
‘केपी ओली यस्ता व्यक्ति हुन् उनलाई लाग्यो भने नीति, नियम, कानुन केही भन्दैनन्, सोझै काम गर्दिन्छन्,’ ती दाइले अगाडि भने, ‘ओलीलाई मनमा लाग्यो भने म पनि श्रमिक, तपाईंहरू सबै श्रमिक, आउनुहोस्, काम गरौँ, देश बनाऔँ भन्न बेर छैन ।’
हुन पनि हो । श्रम सानो र ठूलो हुँदैन, सबै समान हो । संसारभरका श्रमजीवी एक होऔँ भन्ने आदर्श बोकेका पार्टीको सरकार भएको बेला देश परिवर्तन नभए कहिले हुन्छ ? सबैमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको शुभकामना ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १८, २०७८, ०९:२९:००